विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः पीडितले कहिले पाउने न्याय ? « रिपोर्टर्स नेपाल
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः पीडितले कहिले पाउने न्याय ?
काठमाडौँ, ५ मंसिर । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
एउटा बलियो कृत्रिम खुट्टा भए पुग्छः द्वन्द्वका घाइते सोडारी
रातिको ३÷४ बजे ‘आमा’ भनेर उनी बोलेको आवाज सुनेपछि पत्नीले घरमा ल्याएर उपचार गर्न अस्पताल लगिन । तर, उनको एउटा खुट्टा काटेर फाँलियो । अर्को खुट्टा चलेन । “द्वन्द्वकै पीडाले बुबा र श्रीमतीको निधन भयो”, उनले आफ्नो दर्द सुनाउँदै भने, “एक छोरी, दुइ छोराको सहारामा बसेको छु, द्वन्द्वको घाइतेका रुपमा अहिलेसम्म केही पाएको छैन ।” सोडारीले अपाङ्ग परिचयपत्र त पाउनुभएको छ तर त्यसबापत निःशुल्क उपचार पाएका छैनन् ।
छोराको सास कि लास चाहियोः बेपत्ता परिवार केसी
व्यास नगरपालिका–११ तनहुँ घाँसी कुवाकी सीता कैनी २४ वर्षको उमेरमा एकल महिला भइन् । सीताका श्रीमान् भरत कैनीलाई माओवादी कमाण्डरको आरोपमा नेपाली सेनाले हत्या गर्दा साढे दुई वर्ष र साढे तीन वर्षका दुई छोरी थिए । परिवार पाल्ने श्रीमान्को हत्यापछि जीवनमा सीताले भोगेको पीडा र दुःखको बयान गरिसक्नु छैन ।
“श्रीमान्लाई सेनाले घरभन्दा आठ किलोमिटर पर लगेर मारिदिए, हारगुहार गरेर लास बल्लबल्ल पाएँ”, द्वन्द्वका बेला पति बियोगमा पर्नुभएकी सीताले भनीन्, “कमाउने श्रीमान् मारिए, कलिला दुई छोरी काखमा थिए, मैले के खाएँ रु के लाएँ रु जीवनमा कति दुःखकष्ट भोग्नुप¥यो भनिसाध्य छैन ।”
सीताका पतिलाई २०५९ वैशाख १६ गते बेलुका ९ः३० बजे नेपाली सेनाले लिएर गएका थिए । पछि मारिएको अबर आयो । दुई छोरीलाई सीताले पढाउन सक्नुभएन । दुई छोरी अहिले विवाह गरेर घरमा छन् । सीता घरमा एक्लै बस्छिन् । अहिले पनि उहाँको प्रश्न यही छ मेरा पतिलाई विनाकारण किन मारियो ?
छिटो न्याय पीडितको अधिकार होः अधिकारी
द्वन्द्वपीडितको आवाज उठाउँदै हिँड्ने सुमन अधिकारी आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित हुन् । आफ्नो पीडासँगै अरु सबै पीडितको न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक थिए । उनका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रुखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा छः कानूनमन्त्री बडु
“गठबन्धनको सरकार बनेको छ, यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको विषय छ, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने नै हो”, मन्त्री बडुले भने, “पीडितलाई न्याय दिन ढिला भइसकेको छ, धेरै ढिला गर्नु हँुदैन, दलको सहमति र पीडितको सरोकारलाई ध्यान राखी सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानूनी राज्य, मानव अधिकार प्रतिबद्धताअनुसार टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”
पीडितलाई न्यायमा ढिलाइ गर्दा झन् जटिलता हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “दलको सहमतिमा आवश्यक कानूनलाई पूर्णता दिन्छौं, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण गरी पीडक र पीडित छुट्याउनुपर्छ र मुलुकमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । रासस